John Bruno, sonia vaovao an'ny injenieran'ny Apple | Avy amin'ny mac aho
Misy lafiny Apple izay tadiavin'ny orinasa hafa ao amin'ity sehatra ity: izy ireo no mpanamboatra chip ho azy ireo manokana - mpanodina - hanampy ny fitaovany. Marina ihany koa fa ny Huawei (Kirin-dry zareo) na ny Samsung (Exynos) dia ohatra tsara hafa amin'izany. Ary Google, izay manandrana miavaka amin'ny fivarotana ny fitaovany, te-hanao chip manokana ho an'ny famoahana amin'ny ho avy.
Ary ny fikatsahany hahita olona afaka mitarika ity fizarana ity no nahatonga ny orinasan'ny Mountain View hiverina teo amin'ilay lohan'ny injeniera ho an'ny processeur A-series malaza an'ny Apple, John Bruno. Ilay injeniera mihintsy dia efa hita taratra amin'ny mombamomba azy Linkedin ny sonia nataony ho an'ny goavambe amin'ny Internet.
Google dia mandeha matanjaka amin'ny sehatry ny haitao. Ary hery manaova ny solo-sainao manokana ary asaivo mandeha tsy misy fotony miaraka aminao izy io rindrambaiko no tena irinao indrindra, tsy ny Google ihany, fa ny orinasa elektronika mpanjifa rehetra. Noho izany dia tadiavina hatrany ny talenta mba hananana ny tsara indrindra.
John Bruno dia ex-AMD izay nandany ny dimy taona lasa teo amin'ny famolavolana ny chips Apple A. Ny fahombiazan'ireo chips ireo dia tsy azo odian-tsy hita: mila manao fotsiny ianao jereo ny fomba fiasa, ohatra, ny processeur nanome ny iPad Pro. Ny zava-bitan'ny A10X aza dia mihoatra ny endriny sasany amin'ny MacBook Pros farany.
Toy izany koa, ny fanaovan-tsonia an'i Bruno dia manatevin-daharana ny hafa avy amina orinasa samihafa ao amin'ny sehatra arak'izay azony atao Qualcomm na Motorolaary koa ny injenieran'ny Apple hafa. Ny zavatra hainay mazava dia ny miaraka amin'ity hetsika ity dia te hisongadina amin'ny fifaninanana i Google ary hamolavola fitaovana namboarina izay miavaka amin'ny fifaninanana amin'ny Android, izay tena marina fa vitsy ny zava-baovao ao amin'ny Google platform nefa tsy manisa an'i Samsung na Huawei. Toy izany koa John Bruno dia efa manana traikefa amin'ny firosoana amin'ny fifaninanana ary manao ny vokatra Apple hamorona symbiosis lehibe eo anelanelany Hardware y rindrambaiko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » John Bruno, sonia vaovao an'ny injenieran'ny Apple an'ny Google